ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ပလာစတာ
ကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ဗျာ အလွဲဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့အရိပ်လို ဖြစ်နေပါ ပြီး တစ်ခါမှ အဆင်ပြေပြေ နဲ့ ပြီးသွားတယ်ဆိုတာမရှိသလောက်ပဲ ၊ အဲ…. အဆင်ပြေခဲ့ ရင်လဲ ၁၀ ခါလောက် မှ ၁ ခါပေါ့ ။ ကျနော်က ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်နဲ့စာရေးလေး တစ်ယောက်ပါ ၊ တကယ်တော့ ဘာမှ လဲ မယ်မယ်
ရရ မတတ်ပါဘူး၊ နေတာကတော့ ရုံးခန်းနဲ့ နည်းနည်းလေးလှမ်းတဲ့အခန်းလေး တစ်ခုမှာနေတယ် ခြံဝင်းတစ်ခု ထဲမှာပါပဲ တစ်ယောက်ထဲ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းကလဲ မရှိ . တနင်္ဂနွေ လို ပိတ်ရက်မျိုး
ဆိုရင်တော့ အခန်သန့်ရှင်ရေးလုပ် ၊ ကိုးရီးယား အ၀တ်လျှော် နည်းလေးနဲ့အ၀တ်လျှော်(ကော်ဇလုံးအကြီးကြီးထဲ ဆပ်ပြာရေဖျော်ထားတဲ့ထဲ အ၀တ်တွေထည့် ပြီးရင် တက်နင်း အဲ့လိုလျှော်တာ ) ၊ စာဖတ် ..ညနေရောက်ရင် ရေချိုး၊ထမင်းစောစော စား ပြီးရင် ဘလော့တွေ လိုက်ဖတ် တစ်ခါဖတ်ပြီးဆို တွေ့ သမျှ
ဘလော့တွေ လိုက်ဖတ်တာဆိုတော့ အချိန် ကဘယ်လိုကုန် သွားမှန်းကို မသိတော့ဘူး ညနေ ၅ နာရီထဲ က စဖတ်တာ ည ၉ နာရီ ကျော်နေပြီး မပြီးသေးဘူး၊ ဒီကြားထဲ တီဗွီကလဲ ကြည့်ချင်သေးတယ် တနင်္ဂနွေနေ့ညဆိုတော့ အစီအစဉ်တွေ ကကောင်းတယ်လေဗျာ…. ၂ နားရီလောက် တီဗွီကြည့်ပြီး အိပ်ငိုက်သလိုဖြစ်လာတော့ တီဗွီ ပိတ် .အိပ်ယာခင်း ၊ဘုရားရှစ်ခိုး( ပေါက်ဆိန်သုံးချက်ပေါက်)ပြီးတော့ အိပ်မလို့ လုပ်တုန်း…ဟဲဟဲ ကျနော့ ဖုန်းက ၀င်လာပါကော …စကားတွေပြောနေရင်းနဲ့ အိပ်ငိုက်တဲ့ စိတ်တွေ ပျောက်သွားတာပေါ့ တကယ်တော့ အကြွေးတောင်းတဲ့ဖုန်းပါ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ၁ နာရီ ထိုးနေပြီး….ဟားးးးးမနက်ကျ အလုပ်လုပ်ရအုံးမယ် လကုန်ရင် ဆပ်ပါ့မယ်လို့မြန်မြန် စကားကြောဖြတ်
နောက်ထပ်လေကြောရှည်တာက ၁၅မိနစ် …အချိန်တွေ ကအခုမှ ကုန်မြန်လိုက်တာဗျာ…နာရီနှိုးစက်ပေး
ဒီိလောက်တစ်နေ့ လုံး အလုပ်ကြီး အက်ိုင်ကြီးတွေ လုပ်ထားတဲ့ကျနော့ မျက်လုံး ဘယ်ခံနိုင်တော့
မှာလဲဗျာ..နှိုးစက်နာရီိမြည်းနေ တာ အိပ်မက်ထဲ မှာအောက်မေ့နေတယ် …အိပ်လို့ ကလဲ ကောင်းမှကောင်း
ကဲ ….စပါပြီဗျာ ကျားနဲ့ဆင် လယ်ပြင်မှာတွေ့ပြီး ..အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ အစ်မကြီးတစ်ယောက်က
‘’ဟေ့ …မောင်လေး ..နင်အိပ်ယာမထသေးဘူး လားဘယ် အချိန် ရှိနေပြီးလဲ’’
ဆိုမှ…ဟားးးးးးးးးး နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၉.၃၀ ရှိပြီး …အလုပ်ချိန် က မနက် ၈နာရီ..အဲ့ဒါမှ ဒွတ်ခ
ကမန်းကတန်း အိပ်ယာသိမ်း ၊မြန်မြန်လေး ရေချိုးခန်းပြေ အ၀င်း….အောက်မြလေး သေပါပြီဗျာ ရေချိုးခန်း တံခါးနဲ့ကျနော့နဖူးတိုက်တာ ကွဲပြီးလားမသိ -အားရိုးရိုး နာလိုက်တာ ….နဖူးပြန်စမ်းကြည့်တော့တော်သေးတာပေါ့ ဘာမှမဖြစ်လို့ ရုံးကလဲ သွားရ အုံးမှာဆိုတော့ နာနေလို့ မပြီးသေးဘူး မြန်မြန် လုပ်ရအုံးမယ် သွားတိုက် ပြီး ရေချို မလို့ရေ ပိုက် ကို အားရပါရ ဖွင်ချ လိုက်တော့ ..အားးးးးးးးး ပူလိုက်တာ ရေပူတွေ ဘယ်သူဖွင့်ထားလဲ မသိ…ဘယ်**** ဖွင့်ထားတာလဲကွ ( စိတ်ထဲက) တကယ်တော့ ဘယ်သူ့ ကိုမှလဲ မမေးရဲ ဘူး...ဒီအိမ်မှာ က ကိုယ့်ထက်ငယ်တာလဲ တစ်ယောက်မှ မရှိ ကျနော် ရဲ့ နဂို မဖြူတဲ့အသား (ကုလားရေနွေးပူလောင်သလို) နီနီ မဲမဲ လေးဖြစ်သွားတာပေါ့....ကဲ ကန်ထဲကရေ ပဲ မြန်မြန်လေးချိုးလိုက်တယ် ..ပြီး အ၀တ်အစားလဲ အနံ့ အသက်လေးပျောက်အောင် ဈေးပေါပေါ Skin lotion : Roll On လေးသုံးလိုက်တယ် …နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၉-၄၅ ရှိပြီး ပြသနာပဲ တစ်ခါမှ လဲဒီလောက်နောက်မကျဖူးဘူး…ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဘွားတော်ကြီး ဆူတော့မှာပဲ နားပူအုံးမယ်…ကဲ ထွက်စမ်း အကြံညဏ်တွေ ထွက်စမ်း..ပါစပ်ကလဲ ဂါထာရွတ်သလိုလို လက်ကလဲ အံဆွဲ ထဲမှာ ဘာများရှိ မလဲ လိုက်ရှာ…တွေ့ ပါပြီဗျာ
ခေါင်းကပ် ပလာစတာလေး တစ်ခု..ဟုတ်ပြီး ဘာမှလဲ မဖြစ်ပဲ နားထင်မှာကပ် ပြီး အဆင်ပြေ မပြေ မှန်ထဲ မှာကြည့်..အိပ်ရေး အရမ်းဝနေတဲ့ ကျနော့ မျက်နှာ က ခေါင်းကိုက်တဲ့ ပုံစံ မှ မပေါက်တာပဲ….ဘာဆက်
ဟားးးး……..ဟုတ်ပြီးကွ * ဖြန်း ဖြန်း ဖြန်း * ကိုယ့် ပါး ကို ယ်ကို ၄ -၅ ချက်လောက် တီးထည့်လိုက်တယ် ..အီအီး နာလိုက်တာ ပြီးတော့မှန် ပြန်ကြည့်မျက်နှာက အရမ်းနီ သွားပြီး…အိုကေ ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေပြီ
ပိုးသေသေ ၊ တကယ့်လူမမာ ပုံစံနဲ့ရုံးခန်းထဲ ၀င်သွားတော့ နောက်ကျလို့ဆူမယ်အားခဲ ထားတဲ့ ဘွားတော်ကြီးနဲ့ တိုးပါလေရော …တင်းနေတဲ့မျက်နှာကြိး နည်းနည်း လျှော့ကျ သွားတယ် ကျနော့ကို သနားတာတော့ ဘယ်နည်းနဲ့ မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး ပလာစတာ ကျေးဇူးကြောင့် ပဲ ဖြစ်မယ်…ကဲ စတင်ဗျူး ပါပြီခင်ဗျာ ……..။
‘’ခေါင်းတွေ အရမ်းကိုက်ပြီး ညက အိပ်လို့ မပျော်လို့’’
‘’ညကလဲ အစောကြီး အိပ်တာပဲ’’ ( ညာနေတာ )
“အခုဘယ်လိုနေသေးလဲ ၊ ဆေးခန်းသွားမလားး’’
‘’အခန်းပြန်နာချင်နား၊ မနားချင်ရင်လဲ ရှိတဲ့ အလုပ်တွေ ပဲ ဖြည်း၂ လုပ်နေ’’
“ရတယ်ရတယ် ဆေးသောက်ထားပြီးပြီး ‘’
‘’ရှိတဲ့ အလုပ်ပဲ ဖြည်း၂ လုပ်နေတော့မယ်’’
( အလိမ်ပေါ်မှာဆိုးလို့ )
ဟာဟားးးးးးးးးးးး အောင်ပြီကွ ငါ့အကြံ ကျေးဇူးပဲ ပလာစတာလေး ရေ့မင်းကယ်ပေလို့ ပဲ နို့မဟုတ် ငါတော့ နားကွဲအောင် အဆူခံ ထိတော့မှာကွ…ဆူပြီဆိုရင်တော့ တစ်နေ့လုံးမပြီးတော့ဘူ ပရိတ်ရွတ်သလိုပဲ ကံကောင်းလို့ပေါ့ဗျာ နောက်ဆိုရင် အချိန်ကိုလေးစားမှ ပဲ--အဲ့ဒီညက ဘီယာမသောက်လို့ ပဲသောက်များသောက်မိရင်တော့ ပွဲသိမ်းပြီ….. ။
ကျနော်နဲ့ အလွဲဆိုတာ လျှာနဲ့ သွားလို အမြဲ ဒွန် တွဲးနေတာဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက် သိပ်တော့ မဆန်းတော့ပါဘူး ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သောအလွဲတွေက အလွဲကောင်းပေမယ့် တစ်ချို့အလွဲတွေက ရင်တုန်စရာ အလွဲတွေပါ ။ ပြီးတော့ တစ်ခုခု လုပ်ခါနီးကျ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုက နည်းသွားသလိုဖြစ်လို့ မနည်းစိတ်ပြန်တင်းရတယ် ။ အလွဲဆိုတာ လွဲတိုင်းကောင်းတဲ့ အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် အလွဲတွေကပဲ ကိုယ်အသက်ကြီင်္းလာတဲ့ အခါကျ စဉ်းစားကြည့်ရင် ရယ်စရာဟာသတွေကို ဖြစ်လို့ပေါ့ ။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး အလွဲများနှင့်ကင်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆိုတောင်းလျှက် ။
P-S> စာလုံးတွေ ညှိလို့မရဘူး ဒီလိုပဲဖတ်ပေးပါအုံး ကျေးဇူး ။
ကျွန်တော်နဲ့ တစ်နေ့စာ အလွဲများဆိုပြိး အခန်းဆက်ရေးရင်တောင် ဒီလက်ရာမျိုးနဲ့ဆို မိုက်ပြီ..။
တကယ်လန်ထွက်တယ် ဟာသရသမြောက်အောင် ရေးနိုင်ပ
အဲဒီ့ ပလာစတာ ငှားပါလားဗျာ ...
ကျွန်တော်လည်း အလုပ်သွားတာ အမြဲ နောက်နောက်ကျနေလို့ ..
ဒီလိုလေးတွေ ရေးတတ်ချင်တယ်။း)
ပလာစတာတွေ ရောင်းကောင်းတော့မယ် :)
လွဲလွဲလေးလဲ ကောင်းတာပဲ။ ရေးတတ်ပ
မနာလို ဖြစ်မိတယ်-- ဂယ်။
ဟင့် တတ်နိုင်လွန်းတယ်. အလုပ်နောက်ကျတာ ပလာစတာနဲ့လုပ်စားတယ်..
ဟီး စိတ်တော့ဝင်စားတယ်..ပါးက ကယ် ပြန်၇ိုက်၇မှာလားဟင်..